Tatitra azo atao any UAE | Orinasa Mpampanoa lalàna
Fampitana fahombiazana any UAE
Te hahita ve ianao raha misy fidiram-bokatra vaovao na modely orinasa afaka miasa aminao? Eny, ity no toerana hahatongavan'ny tatitra azo atao. Ny tatitra momba ny fahatapahana dia iray amin'ireo zavatra manan-danja indrindra azonao atao mba hahitana raha misy zavatra mety aminao amin'ny orinasanao. Ity no zavatra tokony ho fantatrao momba azy.
Inona ny tatitra azo atao?
Tetikasa momba ny fitantanam-bola ao anatin'izany ny tranga ratsy indrindra sy ratsy indrindra
Ity dia tatitra iray feno amin'ny kajy ary hilaza aminao ireo safidy isan-karazany azonao atao. Misy loharano voafetra foana izay ahafahanao miasa ary ny tatitra azo atao dia hilaza aminao ny fomba tsara indrindra ahafahanao mampiasa ireo loharano voafetra ho an'ny tetikasanao.
Na izany aza, alohan'ny hahatongavan'ity tatitra ity dia azo atao ny mianatra momba izany. Ity dia fanombanana ny tetik'asa tianao hitranga. Tanjona iray monja no tanjon'ny fandinihana: azo tanterahina ve ny tetikasa? Avy eo ianao nametraka hamaly ity fanontaniana ity amin'ny fomba samy hafa ary raha tsy nahomby ny drafitra tany am-boalohany dia mila manana drafitra vaovao ianao.
Raha fintinina dia milaza amin'ny orinasa iray raha tokony handeha amin'ny tetikasa iray izy ireo na tsia. Rehefa vita ny fandinihana dia efa miomana ny tatitra ary omena ny soso-kevitra farany.
Manombatombana ny fahombiazan'ny tetikasa na ny orinasa efa misy
Ny famakafakana azo atao dia fomba iray hanombanana ny fahaiza-manao sy ny fanirian'ny tetikasa na orinasa iray. Alohan'ny hanomezana fotoana sy vola ho an'ny tetikasa iray ny orinasa iray dia mila mahazo an-dry zareo ny fahombiazan'ny tetikasa ny alohan'ny fampiasam-bola.
Inona no tokony hodinihina rehefa mamorona fanadihadiana / tatitra azo atao?
Na dia manao safidy isan'andro aza isika, ny mpanapa-kevitra izay manamboatra ny fotoanany sy ny volany amin'ny tetikasa dia mila mahatakatra ny antony tokony handehanany. Ny tatitra dia manome fandalinana amin'ny antsipiriany izay manampy amin'ny fiheverana ireo safidy bebe kokoa noho ilay tetikasa tany am-boalohany. Ity no mila dinihinao rehefa mamorona fanadihadiana / tatitra azo atao:
Mila mamorona ilay fandinihana amin'ny fomba izay hahatongavan'izay rehetra kendrena azy. Matetika ny olona dia maniry ny handinihana ny fianarana ho miankina amin'ny tanjon'ny orinasa sy ny ho aviny. Izany dia manampy azy ireo hahafantatra raha mendrika ny mandany fotoana sy vola. Tsy maintsy ataonao miverina ilay fandinihana amin'ny alàlan'ny fampiharana ny fanovana tianao ho hita.
Ny zava-misy sy ny angon-drakitra dia mahatonga ny tatitrao tsy raikitra. Ny tatitrao dia tokony hanana fahatokisana ary data no homena an'io. Mila fampahalalana sy loharano azo itokisana ianao hamerina ny fitakianao.
Ny fahazoana mifantina
Fantaro ny fomba mampitaha ny fifandimbiasanao amin'ny drafitra tany am-boalohany izay mifototra amin'ny zava-misy sy ny tarehimarika. Tsy maintsy ilaina ny hamarananao ireo fitsaboana hafa. Hahatonga ny safidinao ho toa tsy manam-paharoa izany ary ny mpihaino anao dia mora mampitaha ny tenany. Tokony ho hitan'izy ireo hoe nahoana ny safidinao no tsara indrindra.
Ny fahasamihafana eo amin'ny fandalinana fahombiazana sy ny drafitry ny fandraharahana
Efa fantatsika hoe inona ny fandalinana azo atao ary ataontsika alohan'ny hanaovana drafi-piasana. Ny drafi-piasana dia noforonina raha vao voafidy sy noforonina ny fotoana. Ny drafitry ny raharaham-barotra dia manasongadina ny fitomboana sy ny faharetan'ny orinasa mandritra ny fotoana fohy, ny famolavolana fandalinana dia novolavolaina alohan'ny hahitana ny fiasan'ny orinasa.
Antony dimy no antony ilanao anaovana famaritana mety
Manampy amin'ny fomba mazava sy mamaritra ny tanjona
Fanampiana amin'ny famolavolana drafitra momba ny fandraharahana
Fanampiana amin'ny fanatanterahana ny drafitra
Ampio ianao hahafantatra hoe mahomby ny volavolan-kevitrao
Ampio ianao hahatakatra ny mpihaino kendrena
Afaka mamorona fandalinana azo atao amin'ny mety ho tetikasa na tetikasa ianao. Hanampy anao handinika ny hevitrao izany ary hanao safidy bebe kokoa. Raha tsy misy fandalinana azo atao ary hitaterana ny ezaka ataonao dia mety tsy handroso na mety hiatrika fahasahiranana amin'ny ho avy.
Ento any amin'ny tsenan'ny UAE ny hevitrao momba ny orinasanao
Famakafarana tsena ao anatin'izany ny fijerin'ny indostria sy ny fangatahan'ny tsena